iziyaluyalu wokugaya ukudla bese sezinyawo ukubambezeleka ukuletha ukungakhululeki ngokuthi indoda. Ziyolekelela wamathumbu ukunyakaza njengamanje kukhona okuningi izimali. Yizidakamizwa zithathwa ngomlomo noma atholakala ngokuqondile ingquza. Kunemithi ezinyakazayo kuyashesha futhi kancane. Isihloko sethu uzokutshela mayelana laxatives amakhandlela "Rektaktiv". Uzofunda mayelana nendlela ukusebenzisa izidakamizwa futhi izindleko zawo.
Ukwakheka, ukuma ukukhulula intengo izidakamizwa
Njengoba wazi, nomuthi "Rektaktiv" iza ngendlela suppositories. Ziklanyelwe kwezokuphatha rectal. Esikhathini iphakethe umsindo 5 noma 10 amakhandlela ezinjalo. Iseli ngalinye sihlanganisa 50 noma 100 amamiligremu angaba akhiphe onsundu ngokulandelana. izingxenye Njengoba ezengeziwe asetshenziswa glitseroidov fatty acid namafutha okuqinile. Balindeleke ukuba bakwazi ukunikeza suppository ifomu elifanele. Umuthi 'Rektaktiv "intengo iyahlukahluka kuye ngokuthi umthamo kanye esikhundleni imithi ukuthenga. Uma ukhetha ikhandlela equkethe angu-50, ke kuyodingeka ichithe ama-ruble mayelana 300. Ngenxa yalesi lemali uzothola 5 amaseli iphakethe. Esikhulu emaphaketheni "Rektaktiv" intengo ruble mayelana 500.
Injongo: yini eyokusiza ukwelapha?
"Rektaktiv" - amakhandlela, ngokulandela imiyalelo, okuyinto nethonya laxative. Isakhi esiyinhloko kusho izenzo ku-receptor ka kwalapho kuhlangana khona imizwa we mucosa emathunjini. akhiphe Dry of ihhashi onsundu kwandisa peristalsis, lapho kukhona abantu baphume okusheshayo indle. Izinkomba ukusetshenziswa zomuthi "Rektaktiv" (amakhandlela) yilezi ezilandelayo amacala:
ukuqunjelwa chronic senile.
Ukwephula umsebenzi ukuthuthwa ipheshana wokugaya ukudla e ukuphila umzimba.
Ukushintsha Kwesimo Sezulu kanye Ukudla, elibangela esihlalweni ukubambezeleka.
ukuqunjelwa ezingamahlalakhona nokuncipha nozwela emathunjini yokwamukela kulandzelana nekuhlunga tinsita.
Amakhandlela Bheka "Rektaktiv" ukuqunjelwa akuyona kuvunyelwe ukusebenzisa zonke umthengi. Uma ukukufunda ngokuningiliziwe imiyalelo, ungafunda kabanzi mayelana nezinye Izimo. Naphezu Ukwakheka zemvelo ngokuphelele, nomuthi asisebenzi uma hypersensitivity kuya izingxenye zalo. Contraindicated ukusetshenziswa suppositories nge wamathumbu isimiso (kuqinisekisiwe, futhi uma kukhona izinsolo kancane ke).
Akunconyelwe ukwethula amakhandlela abstract ne ukuqunjelwa spastic, haemorrhoids acute, proctitis futhi paraproctitis, ukuvuvukala wamathumbu isifo kanye kumiswa imifantu. Ukusetshenziswa imithi ngesikhathi sokukhulelwa kuchazwa kakhulu kabi. Ukufundiswa uthi ukusetshenziswa omama esizayo kwamukelekile ezimweni lapho inzuzo kowesifazane bulingana ingozi impilo umbungu. Nokho, laxatives amakhandlela ngesikhathi yokuzala kungase kubangele ithoni lesizalo. Esimweni ngasinye, kufanele uqale ubonane nodokotela.
"Rektaktiv" (ikhandlela): Ukufundiswa kanye Isikali
Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo kumelwe ugeze izandla zakho kahle. Khona-ke ukususa spike kusukela suppositories iphakeji ngiwunqamule umthamo owodwa. Donsa onqenqemeni uhlukanise futhi ususe i-plug inhlansi. Faka izidakamizwa ngemva kwalokhu udinga ngokushesha ngangokunokwenzeka. Thatha isikhundla ukhululekile futhi uqondise ukuphela ezicijile we suppository phakathi orifice bendunu. Umunwe ibenze ikhandlela ezijulile. Administration kwemithi "Rektaktiv" (amakhandlela) kumele imizuzu 10-15 ngaphambi sokuzikhulula ehleliwe. Khumbula ukuthi leli thuluzi libhekisela izidakamizwa okusheshayo. Isikali lokuqala 50-100 mg izidakamizwa, okuyinto ilingana 1-2 amakhandlela. Umthamo esiphezulu ngelanga - 300 mg. Ngemva kokusebenzisa umkhiqizo wakho, geza izandla.
Yini imicabango yabantu akhiwa mayelana imithi?
Njengoba abathengi njani izidakamizwa "Rektaktiv"? Amakhandlela Bheka, umbono umsebenzisi, abe Ukwakheka okuhle: zonke izithako zemvelo futhi iphephile. Nokho, izindleko imithi liphezulu kakhulu. Phela, ungakwazi ukuthenga imithi nge isenzo efanayo, kodwa ngentengo ephansi. Ngokwesibonelo, "Glycerine amakhandlela." Ochwepheshe iyashaqisa abathengi. Ngemva izidakamizwa "Rektaktiv" kuvunyelwe ukusebenzisa ezinsukwini ezingu-30. Ngalesi sikhathi, i-analog ezishibhile ingalutha.
Kukhona isifo idatha efakazelwe mayelana imiphumela emibi yemithi kuchazwe. Abathengi esekhala ubuhlungu besisu, ukuqumba yanda, evutha isasasa. Nokho, zonke lezi zimpawu zinyamalale emva ukunyakaza wamathumbu. Futhi, izidakamizwa kungabangela ukunqwabelana komzimba. Uma uhlangabezana nale nkinga, kufanele ngaso sonke isikhathi uxhumane nodokotela. Uma usebenzisa amaphilisi amaningi zomuthi (ngaphezu kuka-3 suppositories 100 mg) we mucosa emathunjini kukhona ngokucasuka ubuhlungu, kanye nesifo sohudo.
Ezinye izindaba zika-izibuyekezo mayelana umuthi wokwelapha ukuqunjelwa uhlala omuhle. Abathengi bathi izidakamizwa izenzo ngobumnene futhi ngokushesha. Kungakapheli nemizuzu embalwa ngemva kokuphathwa kumaka nesifiso sokufuna kuqala azikhulula. Ngesenzo ngempumelelo kubalulekile ukulinda imizuzu okungenani eziyisihlanu. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa kunomphumela tonic ebodeni emathunjini. Akukona yokwelula isitho kwemisipha, akusiyo umlutha. izidakamizwa Active kuqinisa imithambo yegazi imbobo excretory. Ngo exchange isicelo uyalulama sokuzikhulula reflex futhi bioritim.
Nomuthi "Rektaktiv" kuyinto izidakamizwa ngempumelelo futhi iphephile ekwelapheni ukuqunjelwa. imfuyo yayo asebenzayo akusho buthelela emzimbeni. Umuthi emva isingeniso izenzo ngqo futhi engashiyi umphumela ngemva sokuzikhulula. Thenga suppositories ngasiphi ekhemisi eseduze ngaphandle kadokotela. izimo Isitoreji optic elula iziguli: the lokushisa kuma kumele singeqi degrees 25. Impilo eshalofini zomuthi izinyanga 22 kusukela ngosuku womshini (usuku njalo eboniswa ku iphakethe). Ungasebenzisi izidakamizwa ngemva kwesikhathi esethiwe. Akwamukeleki nalapho kufaka ukugcina suppositories kwambulwe noma zibahlukanise ibe izingxenye. Ukuze wokugaya ukudla futhi ukubambezeleka esihlalweni Kunconywa uye kudokotela uyofuna icebiso. Hlala uphilile!
Izidakamizwa "FerroFolgamma": yokusetshenziswa
Amabhange Nemithi - ukhohlwe kodwa indlela ephumelelayo aphathe imikhuhlane
Analog "Hexicon" eshibhile futhi iyashelela. Amakhandlela Bheka "Hexicon" ngalokho usizo?
Kuyaqina of nezidingo
Ukudonsa - ithuluzi okuphakade
Kardashian udaba lwempumelelo: umndeni, egcwele newsmakers tabloids emhlabeni